Ihowuliseyili Fine isando isityumzi yoMvelisi kunye noMthengisi | Shengde
Intloko isando chromium isityumzi ocoliweyo yenziwe ingxubevange chromium eliphezulu. Xa kuthelekiswa nentloko yesinyithi esiqhelekileyo sesinyithi, ineempawu zobulukhuni obuphezulu, ukukhutshwa okuhle kunye nokumelana nokunxiba okuphezulu. Isando isando isando, 1010 isando isityumzi, lokusila ibhola lining ipleyiti, isityumzi izinyo ipleyiti, ipleyiti ifuthe, icala unogada ipleyiti, izando ezahlukeneyo ingxubevange, chromium ingxubevange izando isityumzi ocoliweyo, 30 chromium (26 chromium, 22 chromium) kunye nezixhobo zemigodi. Wamkelekile ukuba uthethathethwano kunye nokusebenzisana.
Iimveliso hammer intloko kuthotho isityumzi ocoliweyo ikakhulu iqulunqwe chromium, nickel kunye molybdenum, izinto ingxubevange ezifana vanadium, titanium, boron kunye ezinqabileyo umhlaba wongezwa, ezihambelana ngokufanelekileyo. Ngokusebenzisa inkqubo ekhethekileyo yonyango lobushushu, ulwakhiwo lwematrix olulungileyo ludityanisiwe, ukuze iimveliso zidibanise amandla aphezulu, ubulukhuni obuphezulu kunye nobukhuni obuphezulu, kwaye zilungele amasimi anganyangekiyo phantsi kweemeko ezahlukeneyo zomthwalo!
Ubunzima obuphezulu be-martensite matrix entloko yentloko yesanti yokwenza isityumzi esifanelekileyo ixhasa ngokufanelekileyo amasuntswana e-carbide, ithintela i-carbide ekuweni kwindawo yokunxiba ngexesha lokusebenza, iqinisekisa ukuxhathisa okuphezulu kwento, kwaye ubulukhuni bunokufikelela 62Hrc - 65hrc. Intloko isando ukwenza isityumzi ocoliweyo isetyenziswa mveliso izitena, mveliso ilitye kunye nezinye izinto zokwakha mveliso, kwaye isetyenziswa ngokubanzi yokutyunyuzwa entle shale, gangue amalahle, ingqalutye yomlambo, zwi kunye nezinye izimbiwa. Izinto ezityumkileyo zineempawu zobungakanani be-particle entle kunye neyunifomu, eye yaqatshelwa ngabathengi
1. Intloko yesando se-crusher entle inzima kodwa ayinabukrakra, inzima kwaye iyanxiba. Isiphelo sesando senziwe ngentsimbi ephezulu ye-chromium alloy. Umxholo we-chromium kunye nezinto zayo ze-alloy zihlengahlengiswa ngokweemeko zomsebenzi zabathengi, ukuze intloko yesando ephezulu ye-chromium alloy ikwazi ukufezekisa ibhalansi yokuxhathisa kokuqina kunye nobulukhuni;
2. Inqaku lokudibanisa i-alloy ephosa ulwelo oluphindwe kabini luxinene ngokupheleleyo, ngaphandle kwengubo ebandayo, ukuqhekeka, ukubandakanywa kunye nezinye iziphene, kwaye ubume buxinene; Ngelinye ixesha ukulahla ngaphandle kokuwa, ubunzima obuphezulu, ukuxhathisa okuphezulu, ukuqina okukhulu, ukunxiba ukuxhathisa kwaye akukho lula ukwaphuka. Intloko isando isityumzi (ibhloko) kunye nembasa ipleyiti eziveliswa ulwelo ingxubevange kabini izinto edityanisiweyo babe nobomi inkonzo ende;
3. Intloko yesando se-chromium high crusher crusher ilungile, izithako ziqinile, kwaye unyango lobushushu lusendaweni;
4. Isibambo sentloko edityanisiweyo senziwe ngentsimbi ephantsi ene-alloy, enobulukhuni obuhle kwaye akukho lula ukwaphuka. Intloko yesando yenziwe nge-chromium alloy ephezulu, enokumelana nokunxiba okuhle. Izinto eziphezulu ze-alloy zisetyenziswa kwindawo yokusebenza enefuthe elinamandla, kwaye ubunzima bendawo yokusebenza bungaphezulu kwe-HRC62 degrees. Ezi zimbini zidityaniswe ngokwasemzimbeni yinkqubo yemveliso edityanisiweyo engamanzi, ebizwa ngokuba lukhuni kodwa ingekho krwada kuQinisekile kodwa inxiba enganyangekiyo.
5. Ngokweemeko zokusebenza kunye nezithako ezizodwa, izando ezahlukeneyo ezenziwe nge-crusher ze-crusher zilungiselelwe ngokwemidwebo kunye neesampuli ezivela kubathengi;
6. Imiphezulu yenkxaso yentloko yesando iya kupolishwa ukuqinisekisa ubume begude nokuguda. Iyakukhumbuza ukuba uphephe ukulungisa kunye nokupeyinta iimveliso ezihonjisiweyo xa ukhetha ukubekwa okungafunekiyo. Nxiba iindawo ezinganyangekiyo umphezulu ogudileyo, akukho pores, ukubandakanywa kwesanti kunye nezinye iziphene zokuphosa ziya kukhethwa.
Egqithileyo Cone isityumzi banxibe isahlulo kaludaka udonga eqengqelekayo isigaxa isityumzi
Okulandelayo: Impembelelo isityumzi izincedisi